၆၆ (ဃ) နှငျ့ Screen Video
မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိမှာ Cyber Crime အဖြစ်အများဆုံးအမှုကတော့ ပုဒ်မ 66 ထဲက ပုဒ်မ (ဃ) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ဃ) ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ခြောက်လှန့်တောင်းယူခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊ မတရားတားဆီး ကန့်ကွက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ မလျော်ဩဇာသုံး ခြင်း သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း။ အဖြစ်အများဆုံး Social Network ကတော့ လူတိုင်းနီးပါးသုံးနေတဲ့ Facebook ပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှုဖြစ်ပြီးဆိုရင် အများဆုံး သက်သေတင်သွင်းတာက Screen Shoot ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Screen Shoot ရဲ့အားနည်းချက်က Post တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့ စာကြောင်းရေ များတဲ့အခါမှာ Screen Size အနေအထားအရ နှစ်ပိုင်းခွဲရိုက်ရခြင်း၊ Comment များပါက ခွဲပြီးရိုက်ရခြင်း ... Screen Shoot အနေအထားအရ အနည်းငယ် ပုံကို Edit လုပ်ရတာတွေရှိလာပါတယ်။ အသရေဖျက်သူက Post ကိုဖျက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ Account ကိုလဲ De လိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဲအချိန်ကျရင် သက်သေပြရာမှာ စကားအများကြီး မလိုအပ်ပဲပြောနေရပါမယ်။ Screen Shoot ဟာ လက်တလောမှာ အသုံးဝင်ပေမဲ့ တရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်ရရင် နည်းပညာအရ သက်သေပြရာမှာ ပြန်လှန်မေးခွန်းမေးမြန်းရာမှာ မလိုအပ်ပဲ စကားအများ
နိုင်ငံတစ်ကာမှ Secret Service တွေအတွက်အသုံးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို Social Media မှတစ်ဆင့်ရရှိနေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အချက်အလက်တွေ အဆိုပါလူနဲ့ ပတ်သတ်နေတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ အချက်အလက်စတာတွေဟာ Public ဖြစ်တာနဲ့အမျှ အလွယ်တကူ စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေကနေရရှိနိုင်တာတွေကတော့ ဘယ်မှာနေတယ် ဘာအလုပ်ကိုင်လုပ်တယ် ဘယ်နေရာတွေသွားတတ်တယ် ဘာအကျင့်စရိုက်ရှိတယ်ဆွေးမျိုးသားချင်းတွေက ဘယ်သူတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ဘယ်သူတွေ ငယ်သူင ယ်ချင်းတွေက ဘယ်သူတွေ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေက ဘယ်သူတွေ လက်ရှိတွဲနေတဲ့ရည်းစားကဘယ်သူ .. လက်ရှိဘယ်သူတွေနဲ့အများဆုံးတွဲနေလဲ ဘယ်သူတွေနဲ့ အများဆုံးတွဲသွားတွဲလာရှိလဲ Social Media မှာဘယ်သူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်အများဆုံးရှိတယ် စတဲ့အချက်အလက်တွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Public ဖြစ်တာကြောင့် အချက်အလက်တွေကို စုံးစမ်းဖို့အတွက် လွယ်ကူပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သံသယရှိရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိရုံနဲ့(ဥပမာ CCTV ကနေရရှိသောဓာတ်ပုံ) Social Media ကနေတစ်ဆင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သံသယရှိသူဟာ Social Media အသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် ……. ။ အချို့သော Company များမှာအလုပ်လာလျှောက်စဉ်ကတည်း
Mobile Forensics Basic . Mobile Forensics အခြေခံအချက်အလက်များ
Mobile Device Seizure (မိုဘိုင်း Device များကို သိမ်းဆည်းခြင်း) ၁။ Mobile ဖုန်းသည် Power On အနေအထားတွင်ရှိနေပါက ပါဝါ ဖွင်လျှက်သိမ်းဆည်းပြီး Forensics Lab သို့ ပို့ဆောင်ရာတွင်လဲ ဆက်လက်ပြီး Power On အနေအထားဖြစ်အောင် အားသွင်းထားရပါမည်။ ၂။ ပါဝါပွင့်နေသည့်အနေအထားတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း၏ အချိန်နှင့်နေ့ရက်ကို စစ်ဆေးပါ။ ၃။ပါဝါပွင့်နေစဉ် သိမ်းဆည်းချိန်တွင် အသုံးပြုနေသော App များကိုမှတ်သားထားပါ။Back Ground Running App များအပ်ါအ၀င်။ ၄။ ပါဝါပွင့်နေပါက Mobile ဖုန်း၏ Security Setting များကိုတစ်ခါတည်းမှတ်သားပါ Eg Password,pin,pattern,Face Lock, Finger Lock ,Remote lock , Device Encryption , ၅။ kill Switch Feature ( Remote Wipe) မဖြစ်စေရန် သိမ်းဆည်းပြီး ပို့ဆောင်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ၆။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တွင် Wireless & Charger မလုပ်ပါက Factory Default ပြုလုပ်သော App များရှိပါသည် ======== Mobile Device Seizure (မိုဘိုင်း Device များကို သိမ်းဆည်းခြင်း) ၁။ Mobile ဖုန်းသည် Power On အနေအထားတွင်ရှိနေပါက ပါဝါ ဖွင်လျှက်သိမ်းဆည်းပြီး Forensics Lab သို့ ပို့ဆောင်ရာတွင်လဲ ဆက်လက်ြ
Mobile Sim Swap Attack
မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ ဖြစ်​ပွားတာ အနည်းငယ်​သာရှိ​ခဲ့​ပေမဲ့ အခုတ​လောမှာ ပြည်​ပနိုင်​ငံအချို့မှာ ပြန်​လည်​အသုံးချလာပါတယ်​ ပထမဦးစွာလူတစ်ဦးတစ်​​ယောက်ရဲ့ ​အချက်​အလက်​ နဲ့ ကိုင်​​ဆောင်​တဲ့ ဖုန်းနံပတ်​ ​ကို စုံစမ်းပါတယ်​..ဒီဖုန်းနံပတ်​ကို အသုံးပြုပြီး ဘာ​တွေကို Account ​ဖွင့်​ထားတယ်​ စတဲ့ အချက်​အလက်​​တွေကို စုံစမ်းတာဖြစ်​ပါတယ်​.. ဥပမာ Social Media Account တစ်​ခုကို Password Reset လုပ်​တဲ့အခါမှာ Social Media Website က​နေ ​ဖုန်းနဲ့ပတ်​ရဲ့​နောက်​ဆုံး ၂ လုံးကို​ဖော်​ပြပြီး ယခုဖုန်းနံပတ်ကို ​​​Code ပို့ မလား​မေးပါတယ်​ ဒါဆိုရင်​ ဖုန်းနံပတ်​ ၂ ခုရှိတယ်​ဆိုရင်​​တောင်​မှ ဘယ်​အ​ကောင့်​ကို ဘာဖုန်းနဲ့ အသုံးပြုထားတယ်​ဆိုတာခန့်​မှန်းလို့ ရနိုင်​ပါတယ်​... စုံစမ်းပြီးတာနဲ့ သက်​ဆိုင်​ရာ မိုဘိုင်း ​အော်​ပ​ရေတာထံမှာစုံစမ်းလို့ရတဲ့ အချက်​အလက်​ကိုတင်​ပြပြီး ဖုန်းကဒ်​ပျက်​စီး တယ်​ ဒါမှမဟုတ်​ ​ဖုန်းကဒ်​​ပျောက်​ဆုံးတယ်​ဆိုပြီး မူရင်းနံပတ်​အတိုင်း ​နောက်​ထပ်​ကဒ်​အသစ်​တစ်​ခုကို​လျှောက်​ထား တာဖြစ်​ပါတယ်​.. အချက်​အလက်​​တွေကို အ​သေးစိတ်​စုံစမ်းထားတာဖြစ်​လို့ .. အချက်​အလက်​အတုပြုလုပ်​
Mobile Cloud Forensic and Challenge (Mobile Forensics ဘာသာရပျ )
လက်​ရှိ အသုံးပြု​နေတဲ့ Mobile Phone ​တွေမှာ ကိုယ်​​ရေးကိုယ်​တာနဲ့သက်​ဆိုင်​တဲ့ information ​တွေ အလုပ်​နဲ့သက်​ဆိုင်​တဲ့ Information ​တွေ အများကြီးရှိပါတယ်. Smart phone​တွေကိုစစ်​ဆေးတဲ့နည်း ​တွေလဲမျိုးစုံရှိပါတယ်​Lowes level က​နေစလို့​​ပေါ့ ... Lowest Level ဆိုတာ ဖုန်းမှာပါတဲ့ Chip ကိုဖြတ်​ပြီး Data recovery ပြန်​ယူတဲ့ နည်းပါ ...​ငွေ​ကြေး ပညာပိုင်း အကုန်​အကျအရမ်းများပါတယ်​ ဘယ်​လိုအ​ခြေအ​နေ​တွေမှာရယူလဲဆိုရင်​ Passcode အခက်​ခဲရှိတဲ့အခါ Physical ပိုင်းအရဖုန်းက ပျက်​စီး​နေ​တဲ့ အခါ​တွေကြမှသာ ပြုလုပ်​တာဖြစ်​ပါတယ် ​Full Disk Encryption ​တွေ​ကြောင့်​​နောက်​ပိုင်း Model အမြင့်​ဖုန်း​တွေမှာ အခက်​ခဲရှိပါတယ်​.Encryption ကလဲ User ထားတဲ့ Passcode နဲ့ဆက်​စပ်​​နေပါတယ်​ ​နောက်​ပိုင်း Iphone က​နေစလို့ Mobile device ​တော်​​တော်​များများမှာ backup စနစ်​ ၂ ခုပါဝင်​ပါတယ်​. Local Backup နဲ့Cloud Backup စနစ်​​တွေပဲဖစ်​ပါတယ်​. သုံးတဲ့ User အ​ပေါ်မူတည်​ပြီး Local Backup က​နေ အချက်​အလက်​ရနိုင်​သလို Cloud Backup က​နေလဲရနိုင်​ပါတယ်​.Cloud Backup က​တော့ local Backup လု
Location: 3062 Rte 66, Tucumcari, NM 88401, USA
Mobile Forensics Evidence Show In Court With Magnet App Simulator
Forensics Tools ​တွေရဲ့ အဓိက Functions ထဲမှာပါဝင်​တာက Collection နဲ့ Reporting ဖြစ်​ပါတယ်​ ...Collection မှာတူရာတူရာစုပြီး​ဖော်​ပြတဲ့အတွက်​ အချိန်​ကုန်​သက်​သာ​စေပြီး ရှာ​ဖွေရလွယ်​ကူ​စေပါတယ်​. Reporting tool က​တော့ တရားရုံကို သက်​​သေပြတဲ့အခါလွယ်​ကူမြင်​သာ​အောင်​ဖြစ်​ပါတယ်​. Magnet App Simulator က​တော့ mobile ဖုန်းကို ​Virtua l အ​နေအထားနဲ့စစ်​​ဆေးတာဖြစ်​ပါတယ်​ .ဥပမာ သံသယရှိသူရဲ့ဖုန်းကို ရယူပြီး သူ့ဖုန်းထဲမှာပါဝင်​တဲ့ Apk အပါအဝင်​ Source တစ်​ခုလုံးကိုရယူပါတယ်​. ဒုတိယအ​နေပိုင်းအ​နေနဲ့ မူရင်းဖုန်းအတိုင်း ပုံစံအတိုင်း Virtual လုပ်​ပြီး စစ်​​ဆေးတာ ဖြစ်​ပါတယ်​. အလွယ်​ဆုံး​ပြောရရင်​ ကူးယူထားတဲ့ Apk, Data​ ​တွေထဲက​နေသံသယရှိတဲ့ .Viber App ကို Simulator မှာဖွင့်​လိုက်​ရင်​ သူ့ရဲ့ Chat Record ​တွေကို မူရင်းဖုန်းမှာဖွင့်​တဲ့အတိုင်းမြင်​ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​ Magnet App Simulator ရဲ့အားသာချက်​က မူရင်းဖုန်း ကို မစစ်​​ဆေးပဲ Data ပဲယူကာ စစ်​​ဆေးနိုင်​တဲ့ အတွက်​ မူရင်း ​သက်​​သေခံမပျက်​စီးခြင်း . Background Knowledge အနည်းငယ်​နှင့်​စစ်​​ဆေးနိုင်​ခြင်း အခြား​သော Forensics Hardware , For
Mobile Forensics Basic . Mobile Forensics အခြေခံအခ...
Mobile Cloud Forensic and Challenge (Mobile Forens...
Mobile Forensics Evidence Show In Court With Magn...